Color Lights Flashlight Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အရောင်အလင်းများဖလက်ရှမီး
အရောင်အလင်းများဖလက်ရှမီး APK ကို
အရောင်အလင်းများ <> သင်ကမ္ဘာ့အများဆုံးဖျော်ဖြေမှုလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုဆောင်တတ်၏, အားလုံးတဦးတည်း app ထဲတွင်။ အတူအများကြီးအသုံးဝင် features တွေနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံသော tool ကို ဂီတ🎶, အရောင်နဲ့ flash ကို.
အရောင်အလင်းများ app ကိုကင်မရာတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ပိုပြီးအများအပြား features တွေအတူသင်တို့သည်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးသငျသညျအလငျးရောငျ, ကခုန်များနှင့်နားထောင်ခြင်းဂီတခံစားနေသေချာတဲ့အရောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလှည့်။
✔️️ဖလက်ရှမီး App ကို: စူပါတောက်ပနှင့်အတူတစ်ဦးကအဆုံးစွန်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနည်းပညာအစွမ်းထက်အလင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး Android torchlight သို့သင့်ရဲ့ device ကိုလှည့်ဖို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုဦးဆောင်။
✔️️တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါ OFF ON တစ်ခုမှာကိုထိပုတ်ပါ: device ကိုသော့ဖွင့်နေစဉ်သင်ရုံကိုအသာပုတ်, အကြောင်းကြားစာဘား (flash ကိုအကြောင်းကြားစာ) တွင်သင်၏သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကနေ / ဖလက်ရှမီးနဲ့ screen ကိုအလင်းချွတ်ပေါ်ပြောင်းနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော,
✔️️cool Interface: လှပသော interface နဲ့သန့်ရှင်းတဲ့အပြင်အဆင်တွေနဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်စစ်ဆင်ရေး, ရိုးရှင်းသောချောမွေ့မြန်ဆန်စေ!
✔️️ရောင်စုံပတ်ဝန်းကျင်: ဒစ္စကိုဘောလုံးကိုနှင့်အခြားအလင်းသက်ရောက်မှုတူအောင်ဖန်တီး, သင့်စတိုင်ကို select, အရောင် mode ကိုအကူးအပြောင်းနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ။
✔️️optimized: ဘက်ထရီဖော်ရွေ, စူပါတောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့ဂီတပေါင်းစပ်။
✔️️အဘယ်သူမျှမမလိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်မရှိ data ကို collection များကို: ဂီတ၏ rythm မှရိုက်နှက်ဖို့လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုထိန်းချုပ်မယ့်ကင်မရာကို။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ privacity လေးစားပါတယ်။
✔️️ရိုးရှင်းသောဖလက်ရှမီး: အဘယ်သူမျှမလမ်းပေါ်အလင်းနှင့်အတူအပြင်ဘက်သောင်တင်? သင်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်စရာမလိုဘဲက on / off ကိုဖွင့်နိုင်သည်ကိုအမြဲ disponible ဖလက်ရှမီး။
✔️️strobing / Blink အလင်းများ: ကြိမ်နှုန်းချိန်ညှိနှင့်အတူတောက်ပ strobing light ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုမှတ်တမ်းတင်သည့်အခါတစ်ဦးကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဦးသတိပေးပေးပို့ဖို့, သင့်ကားထဲတွင်, သင့်ဆိုင်ကယ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
✔️️သင့်ရဲ့ဂီတလှုပ်ရှားပုံများ! အရောင်အလင်းများလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုဂီတ Streamers (Spotify, Deezer, SoundCloud) မှမြားနှငျ့ဂီတကစားသမားထံမှဂီတပေါင်းစပ်နှင့်ဂီတ၏ rythm မှရိုက်နှက်နိုငျပါသညျ! Cool!
✔️️ဒစ္စကိုအလင်း: အရောင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကဲ့သို့သင်တို့အ flash ကိုသော graphical equalizer သို့မဟုတ်ဂီတ Visual ကဲ့သို့ပတျဝနျးကငျြသောအသံနှင့်အတူပေါ်နဲ့ off LED ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအေးမြဒစ္စကိုအလင်းသက်ရောက်ဖန်တီးဒစ္စကိုမီးလုံးနှင့်အတူသင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအချိန်လေးလှုပ်ရှားပုံများ။
✔️️ခံစားချက်အလင်း: နှေးကွေးသောမြန်နှုန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာအခန်းတစ်ခန်းမှဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှင့်လေထုဖြည့်စွက်သောသက်တံ့၏အရောင်များကိုပြသနေတဲ့ညဥ့်အလင်းအဖြစ်သင့်မျက်နှာပြင်အရောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးခံစားချက်အလင်းအိမ်၌သင်တို့၏အခန်းကိုအသွင်ပြောင်း။ သငျသညျဆငျခွငျကူညီခြင်းနှင့်တစ်ခုပင်တင်းမာမှု, စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ထုတ်လွှတ်အနားယူနိုင်ပါ။
* ခွင: strobing light ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၏သမိုင်းနှင့်အတူအချို့သောလူ epileptic သိမ်းယူမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကြာရှည်စွာများအတွက်မျက်နှာမှညွှန်ပြမနေပါနဲ့။
အန်းဒရွိုက် 7, အန်းဒရွိုက် 8 နှင့် Android P ကို ​​w သစ်ကို device များအတွက်★ Added ထောက်ခံမှု
★ရရှိနိုင်ဂီတ option ကို၏ရစ်သမ်မှ Beat
★ Optimized ဘက်ထရီစားသုံးမှု
★အခမဲ့ပရီမီယံသရုပ်ပြမုဒ် ( ပို. အရောင်, ဂီတနှင့်ဆိုးကျိုးများ!)
★အတော်များများ interface ကိုတိုးတက်မှု🙂
★မြန် app ကိုပိုတာဝန်ရှိလျော့နည်းနှေးကွေး
💎 chic Apps ကပ💎